Ọnụ ahịa ethanol bilitere nwayọ site na izu gara aga. Ọnụ ego ethanol dị na East China na-arị elu, ọ na-esiri ike ịchọta ụgbọ ala si n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ gaa East China na ego ụgbọ njem na-arị elu, ihe na-ebuga n'èzí n'ebe ọwụwa anyanwụ China na-adị nwayọọ, na mgbakwunye, ala gbara ya gburugburu na-aga n'ihu na-ejupụta nso ...
Ethanol bụ ngwakọta organic, nke usoro kemịkal ya bụ CH3CH2OH ma ọ bụ C2H5OH, usoro ihe omimi bụ C2H6O, nke a na-akpọkarị mmanya.
Ethanol bụ ngwakọta organic, nke usoro kemịkal ya bụ CH3CH2OH ma ọ bụ C2H5OH, usoro ihe omimi bụ C2H6O, nke a na-akpọkarị mmanya. Ethanol bụ mmiri mmiri na-enweghị agba na-agbanwe agbanwe na ụlọ okpomọkụ na nrụgide, obere nsị, mmiri dị ọcha enweghị ike ịṅụ mmanya ozugbo. Mmiri mmiri...
Ethanol bụ mmiri mmiri na-enweghị agba na-agbanwe agbanwe na ụlọ okpomọkụ na nrụgide, obere nsị, mmiri dị ọcha enweghị ike ịṅụ mmanya ozugbo. Aqueous ngwọta nke ethanol nwere ísì mmanya, na ubé mgbakasị, ụtọ uto. Ethanol na-ere ọkụ na vapors ya nwere ike ịmepụta ngwakọta ihe mgbawa ...
COVID-19 nwere ike ịdị ndụ ruo izu ruo ọnwa na mwepu 1 ruo 10 degrees. Taa na-ekiri elekwasị anya
site admin na 21-02-24
Ogologo oge ole ka Coronavirus ga-adị ndụ n'ọnọdụ oyi? Wu Zunyou: Otu bụ ọnụ ọgụgụ mmetọ, nke abụọ bụ okpomọkụ dị n'etiti -1°C na -10°C, nje dị ka COVID-19 nwere ike ịdị ndụ ruo ọtụtụ izu ruo ọtụtụ ọnwa. Yabụ, ị nweghị ike ịhapụ ọgwụ nje kwa ụbọchị. 75% mmanya ...
Kedu otu esi ahọrọ mgbochi nje, idebe ọcha, na igbuchapụ aka sanitizer?
Lezienụ anya na nkwakọ ngwaahịa mgbe ị na-azụta ihe nchacha aka. N'ozuzu, a na-etinye ihe ọṅụṅụ mmanya na-aba n'anya na ya. Nke kacha mma bụ 75%. A naghị atụ aro ịhọrọ 90% ma ọ bụ 95% mmanya na-aba n'anya n'ihi nnukwu ịta ahụhụ ga-etolite pro ...
Ụkpụrụ nke disinfection mmanya
site admin na 20-11-27
Mmanya na-aba n'anya nwere ikike dị ukwuu ịbanye n'ime akpụkpọ ahụ n'elu nje bacteria wee banye n'ime nje bacteria. Na-egbu nje bacteria site n'ịkpọnwụ mmiri, na-ekekọta ma na-ewepụ protein ndị mejupụtara ihe ndabere nke ndụ nje. Ihe mejupụtara nje a bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Mpaghara Shanxi ga-akwalite mmanụ ụgbọala ethanol nke ọma site na 2020
A na-akọ na iji kwalite usoro ike ahụ, belata mmetọ ikuku ụgbọ ala, ma melite gburugburu ebe obibi, malite n'afọ a, mpaghara anyị ga-agbasi mbọ ike ma na-agbasi mbọ ike iji mmanụ ethanol maka ụgbọ ala na mpaghara niile dịka .. .
National Energy Administration na-enyocha nkwalite na ojiji mmanụ ụgbọala ethanol maka ụgbọ ala (Apr 10th, 2019)
Na-esote na February 26, 2019, National Energy Administration nwere nnọkọ na ụlọ ọrụ biofuel ethanol na Beijing iji gee ntị n'echiche na aro nke ụlọ ọrụ; na mbido March, ngalaba izugbe nke National Energy Administration nyere ozi...